एमालेभन्दा गठबन्धनले दोब्बर बढी जित्ने देखियो – कांग्रेस प्रवक्ता महत « dainiki
१४ असार २०७९, मंगलवार | Tue Jun 28 2022
एमालेभन्दा गठबन्धनले दोब्बर बढी जित्ने देखियो – कांग्रेस प्रवक्ता महत
१ जेठ, काठमाडाैँ स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ । समाचार तयार पार्दासम्म २३ वटा स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसमध्ये एमाले १०, कांग्रेस आठ, माओवादी केन्द्र तीन र एकीकृत समाजवादी दुई स्थानीय तहमा विजयी भएका छन् । बाँकी ७३० स्थानीय तहको मतगणना भइरहँदा कांग्रेसले धेरै पालिकामा अग्रता बढाएको छ । चुनावको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा न्युज कारखानाले कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतसँग चार प्रश्न सोधेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतगणनाको प्रारम्भिक विवरणप्रति कांग्रेसको मूल्यांकन कस्तो छ ?
परिणाम नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनको पक्षमा आइरहेको छ । प्रारम्भिक अग्रताको संख्या हेर्ने हो भने पनि कांग्रेस निकै माथि छ । गठबन्धन दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई जोड्ने हो भने गठबन्धनलाई राम्रो परिणाम प्राप्त हुने देखियो । प्रारम्भिक परिणामलाई आधार मान्दा कांग्रेसले धेरै स्थानीय तहमा जित्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । समग्रमा गठबन्धन दलहरूलाई फाइदै भएको देखियो ।
गठबन्धनको सार्थकता पुष्टि भएको भन्न मिल्ला ?
हो । सबै ठाउँमा गठबन्धन त भएन । नभएको ठाउँमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा छ । जे भए पनि समग्रमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुने लक्षण देखियो । माओवादीले पनि राम्रै संख्यामा अग्रता लिइरहेको छ । गठबन्धनका अन्य दललाई पनि राम्रो हुने जसरी देखिएको छ, यसले एमालेले भन्दा गठबन्धन दलले दोब्बर बढी स्थानीय तह जित्ने देखिन्छ ।
कांग्रेस एक्लै पनि एमालेभन्दा धेरै माथि छ । यो खुसीको संकेत हो । जुन पृष्ठभूमिमा समझदारी भएर गठबन्धन बन्यो, त्यो सार्थकता पुष्टि हुने देखिन्छ ।
तालमेलको क्रममा कांग्रेसले जहाँ–जहाँ नेतृत्व पाएन, कांग्रेसबाटै बागी उठाउने र गठबन्धनकै अन्य दलका उम्मेदवारलाई धोका दिएको भन्ने आरोप सुनिन थालिएको छ नि ?
एक÷दुई ठाउँको उदाहरण दिएर हुँदैन । हो, केही ठाउँमा त्यस्तो आरोप लगाउन मिल्ने गरी स्थिति देखियो । तर, धोका होइन । जस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धन दल माओवादीकी प्रमुखले निरन्तर अग्रता लिएकै छिन् । पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीकाका मेयरले लगातार अग्रता लिएको स्थिति छ ।
त्यहाँ त कांग्रेसको मत संख्या माधव नेपालजीको पार्टीभन्दा कता हो कता धेरै छ । हाम्रो पार्टीका नेताहरूको असन्तुष्टि पनि थियो । तैपनि पार्टीको आन्तरिक मतभेद टुंग्याउँदै कांग्रेसको पूरै सहयोग छ । उहाँ (धनराज आचार्य)ले जित्नु हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यही कारणले कांग्रेसले धोका दियो भन्नु गलत हो ।
ललितपुुर महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगर, धुलिखेल नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा फरक फरक परिणाम देखिएको छ नि ?
तपाईंले भन्नुभएको स्थानीय तहमा कांग्रेस ठूलो पार्टी हो । हामी उदार भएर गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई सँगै लगेका हौँ । तर, त्यहाँको वस्तुस्थिति गठबन्धनअनुसारको भएन । हाम्रै पार्टी त्यागेर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मनोजकुमार साहजी स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचन लड्नुभयो । मनोजजी अगाडि आइरहनुभएको छ । धुलिखेलमा पनि विदुर बस्नेतजी अघि आउनुभएको छ । यसलाई ‘अपवाद’ मान्नुपर्छ । यति धेरै स्थानीय तहमा गठबन्धन सफल भइरहँदा अपवादलाई उचाल्नु हुँदैन ।
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७९, आईतवार १३:१६
युवाहरु उद्यमशिल बन्नुपर्छ: अध्यक्ष मानन्धर
१३ असार, भक्तपुर । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धरले युवाहरु चुप लागेर नबसी उद्यमशिल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लियो क्लब अफ सूर्यविनायक
खार्पुनाथका विद्यार्थीमा देखियो ठेउलाको लक्षण
भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउने विषयमा सराेकारवालासँग छलफल
नेपालटारमा दिलमायाको हत्यापछि सूर्य आफैँले लेखेका थिए ‘नक्कली सुसाइट नोट’
गायिका दिलमाया सुनार हत्या प्रकरणः प्रेमी सूर्य श्रेष्ठ पक्राउ
विदुरको नगरसभा भोलि, एमालेले फेरि माइन्युट च्यात्छ कि सभामा बस्छ ?
मनमोहन सम्झदै प्रदेश १ की कान्छी उपाध्यक्षको बजेट भाषण
एनआरएनएले नेपालमा धेरै योजना भित्र्याएको र पूरा गरेको छः कुल आचार्य (अन्तर्वार्ता)
बहुपदीय प्रणालीमा सहमति भएसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष भएका हुन् कुल आचार्य। एनआरएनएको
अन्तर्वार्ता : जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नेगरी भ्रष्टाचाररहित परिणाममुखी काम गर्छु- मेयर कृष्ण रानामगर
९ असार, काठमाडाैं । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ चर्चामा रहेको गोरखा नगरपालिकामा अन्ततः
निर्वाचन परिणामलाई परिपक्‍वतापूर्वक विश्लेषण गरौँ, लाञ्छना नलगाऔँः महामन्त्री शर्मा (अन्तर्वार्ता)
आगामी सङ्‍घी र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष
अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो भएको नेकपा एमाले यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ
सूचना विभागमा दर्ता नं. : 714
अध्यक्ष तथा कार्यकारी सम्पादक : पवित्रा मुडभरी
प्रधान सम्पादक : माधवप्रसाद तिवारी
प्रयाेगकर्ता शर्तहाम्राे टिम
© 2017 - 2022 dainiki.com सर्वाधिकार सुरक्षित | Website by appharu.com